UPDATE: Faah-faahin ku saabsan Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
UPDATE: Faah-faahin ku saabsan Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Qarax nooca gawaarida lagu dhajiyo ayaa wuxuu ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan Degmada Xamar Jajab agagaarka Dakadda Muqdisho.
Gaari noociisa uu yahay Surf oo uu leeyahay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Booliska ayaa lagu dhajiyay Qaraxaan, xilli gaariga uu taagnaa meel ku dhaw kaalin Shidaal oo Dakadda agteeda ku taal.
Sarkaalka ku dhaawacmay Qaraxaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Janeraal Maxamed Cabdulle Dhoore, kaas oo Booliska u qabilsan Arrimaha dibadda, waxaana la sheegay in qaraxa uu kasoo gaaray dhaawac culus.
Ciidamada Booliska oo gaaray goobta Qaraxa uu ka dhacay ayaa halkaasi ka qaaday dhaawaca Sarkaalkaasi waxaana la geeyay goobaha caafimaadka.
Qaraxa oo ahaa nooca dhajiska ayaanan la garaneyn meesha looga xiray Baabuurka uu watay Sarkaalkasi ka tirsan Ciidamada Booliska Somaliya.
Qaraxyada noocaan oo kale ah ayaa inta badan waxaa ka dambeeya maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ee dagaal adag kula jira dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Degmada Xamar Jajab
gaari lagu dhajiyay